डा.गोविन्द केसीलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजाने पहल विफल, सर्वपक्षीय बैठकमा जुटेन सहमति – KhabarKhurak
काठमाडौं ,२५ कात्तिक। विगत ८ दिनदेखि डडेल्धुरामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले गरेको पहल विफल भएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै पहलमा बोलाइएको सर्वपक्षीय बैठकले ‘डा. केसीलाई इच्छाविपरीत लान मिल्दैन’ भन्दै उनको माग सम्बोधनका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
डा.केसीका सहयोगीहरुले संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि आएर माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा मात्र डा. केसीसँग सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लैजानेबारे आफूहरुले कुरा गर्न सक्ने बताएपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो ।
डा.केसीको स्वास्थ्य चिन्ताजनक
डडेल्धुरा अस्पतालका प्रमुख डा.जितेन्द्र कँडेलका अनुसार डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक छ । डा.केसीको मुटुको चाल बढ्न थालेको, रक्तचाप घट्दै गएको तथा रगतमा अक्सिजनको मात्रा घटेको उनले बताए ।
जिल्ला अस्पतालमा आइसीयु सेवा, एबीजी सेवा, दक्ष जनशक्ति र उपकरणसमेत नभएका कारण आकस्मिक रुपमा भइपरी आउने समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने उनले बताए । कुनै पनि बेला डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था आफूहरु र जिल्ला अस्पतालको क्षमताभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
डा.केसीलाई लिनका लागि डडेल्धुरामा हेलिकप्टर पुगेको छ । सेनाको रनबम गण दहब्यारेकमा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले अझै पनि आफूले डा. केसीलाई बाहिर पठाउनका लागि सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श गर्ने बताए । ‘सर्वपक्षीय बैठकमा सहमति त जुटेन तर पनि म दिनभर यसमै पहल गर्नेछु,’ उनले भने, ‘हेरौं, दिनभरीमा के हुन्छ !’
Tags: डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था
मणिग्रामदेखि नयाँमिल सम्म अज्ञात समूहद्वारा सडक किनारका ३२ बिरुवा काटिए
अस्पतालको लापर्वाहीले १७ वर्षीया किशोरीको ज्यान गएको परिवारको आरोप
मन्त्री पोखरेलद्वारा डा.केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह
सोलुखुम्बुमा लेक लागेर फ्रान्सेली नागरिकको मृत्यु
म्याग्दीका ठाउँठाउँमा बाढी–पहिरो, ३२ जना बेपत्ता Friday, July 10, 2020
देशभर ठूलाे वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन सुझाव Friday, July 10, 2020
८ जना प्रहरीको हत्याका मुख्य अभियुक्त कुख्यात गुण्डा विकास दुबेको प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु Friday, July 10, 2020
पोखरामा पहिरोमा परी ४ को मृत्यु, १० घाइते Friday, July 10, 2020
नेपालमा भारतीय न्‍यूज च्‍यानलहरुको प्रसारण बन्द Thursday, July 9, 2020
सिन्धुपाल्चोक बाढी-पहिरो: ५ घाइतेलाई काठमाडौं ल्याइयो, बेपत्ता २० जनाको पहिचान खुल्यो Thursday, July 9, 2020
गुल्मीमा २६५ जनाले जिते कोरोनाः अब आइसोलेसनमा ७९ जना मात्रै Thursday, July 9, 2020
सार्वजनिक यातायात खोल्ने सरकारको निर्णय Thursday, July 9, 2020
नेपालमा कोरोना संक्रमित दर घट्दै पछिल्लो २४ घन्टामा १०८ जनामा मात्रै पुष्टि Thursday, July 9, 2020
भारतीय अभिनेता सुशीलको निधन, आत्महत्याको आशंका Thursday, July 9, 2020